Iran: Fihetsiketsehana Noho Ny Fandraràna Gazetiboky Momba Ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2017 17:48 GMT
Noraràn'ny governemanta Iraniana roa herinandro lasa izay ny Zanan Magazine (midika hoe “gazetim-behivavy”), taorian'ny 16 taona nivoahany. Tato anatin'ny taona vitsy, nofoanan'ny manampahefana Iraniana ny fahazoan-dalana an'ireo gazety sy gazetiboky marobe, saingy ny fanakatonana an'i Zanan no tena niteraka fanoherana lehibe tao amin'ny firenena sy iraisam-pirenena.
Maherin'ny 120 ireo mpampianatra ambony sy mpikatroky ny zon'olombelona tahaka an'i Noam Chomsky, Jürgen Habermas, Betty Willams, sy Shirin Ebadi nanasonia taratasy manohitra ny fandraràna ary nandefa izany tany amin'ny mpitondra Iraniana.
Maherin'ny 1000 kosa ireo mpanao gazety Iraniana, manam-pahaizana, sy olo-malaza ara-kolontsaina ao Iran sy any ivelany izay nanoratra taratasy mitovy amin'izany ary nidera ny andraikitr'i Zanan tao Iran. Nanomboka nanao fanentanana hetsi-panoherana ihany koa ny Human Rights First.
RazeNo (Syamak Ghasemi) koa nitatitra ity tantara ity hatramin'ny voalohany ary tsy mizara ny heviny fotsiny fa manome rohin'ny gazetiboky sy bilaogy hafa miresaka momba ny fiafaran'ny Zanan ho an'ireo mpamakiny ihany koa.
Nanoratra i Futurama fa tsy nahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny governemanta ny Zanan nandritra ireo taona rehetra ireo ary tena iray amin'ny zava-bitan'ny vehivavy ny gazety. “Toa ny zava-nitranga tamin'ity gazety ity no mahazo ireo gazetiboky sy gazety tsy miankina rehetra eto amin'ny firenena. Saingy ny fanontaniana dia hoe aiza no hiafaran'izany hetsika izany?”
Asieh Amini nisafidy lohateny hoe “Fanatanterahana ny Teny (Execution of Word)” tamin'ny lahatsorany.
Shirin Ahmadinya indray nanoratra amin'ny teny roa, fa tsy gaga izy ary manohy hoe, “Mihamalahelo kokoa izahay isan'andro.”
Kafe Naseri kosa nilaza fa “niantso ny tenany ho gazetibokim-behivavy voalohany tao Iran ny Zanan raha mitovy amin'ny faniratsirana ny teny hoe feminisma ho an'ny maro.”